Global Voices teny Malagasy » Fanentanana Mandrisika Ireo Toeram-pisakafoanana Ao Singapaoro Hampiasa Menaka Voanio Tsy Nanaovana Tavy · Global Voices teny Malagasy » Print
Fanentanana Mandrisika Ireo Toeram-pisakafoanana Ao Singapaoro Hampiasa Menaka Voanio Tsy Nanaovana Tavy
Voadika ny 09 Septambra 2017 5:10 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Singapaoro, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna, Tontolo_iainana
Ny fandripahana ala sy ny fandoroana zezika, ankoatra ny setroka aterany, dia mampitsoaka ny ragidro orangutans ao Malezia sy Indonezia ihany koa. Sary tao amin'ny tranonkala Hetsiky ny Vahoaka Hisorohana ny Setroka
Mampiroborobo ny hetsik'olom-pirenena hanakanana ny fandotoan'ny setroka amin'ny alàlan'ny fandresen-dahatra ny tompon'ny efitra fisakafoanana ao Singapaoro mba hampiasa menaka voanio maharitra ao an-dakoziany ny Hetsiky ny Vahoaka Mampitsahatra ny Zavo-Tsetroka (PM Haze).
Olana miverimberina ny fandotoan'ny zavo-tsetroka any Azia atsimo atsinanana, indrindra noho ny fandripahana ny ala sy ny fandoroana ny zezika ho an'ny tantsaha any Indonezia andrefana, mba hanamorana ny firoboroboan'ny fambolena voanio .Tsy miteraka setroka hidina ao Riau, Indonezia fotsiny ihany izany fa any amin'ny firenena manodidina any Singapaoro sy Malezia ihany koa.
Find out more: https://t.co/fgkh382u0u #hazefreefact #GoHazeFree pic.twitter.com/OAlYjbdJ2r 
Fampahatsiahivana haingana momba ny fifandraisana misy eo amin'ny menaka voanio sy ny zavo-tsetroka!
Araka ny voalazan'ny PM Haze, vokatra malaza maherin'ny 50 isa any amin'ny fivarotan-dehibe no ahitana menaka voanio, izay manosika ny vondrona hanao fanentanana tamin'ny taona 2015 mba handrisihana ny mpanjifa hanao ankivy ireo orinasa izay mamokatra menaka voanio tsy maharitra.
Amin'ity taona ity, manantena ny PM Haze fa “hanaitra ny vahoaka sy ny trano fisakafoanana momba ny menaka voanio misoroka zavo-tsetroka” amin'ny alàlan'ny fanentanana #GoHazeFree (Sorohy ny Zavo-tsetroka). Nanambara ny fikarohana voalohany nataon'ny fikambanana fa maherin'ny 90 isanjaton'ny trano fisakafoanana malaza ao Singapaoro no mampiasa menaka voanio ary tsy misy amin'izany no misoroka setroka .
Avy amin'ny  fambolena misoroka setroka ny menaka voanio maharitra. Raha niainga avy tamin'ny fenitra napetraky ny Dinika misahana ny Menaka Voanio Maharitra (RSPO) ry zareo dia “mampiasa fomba maoderina tsy misy fandoroana tanety hanadiovana ny tany ny fambolena misoroka setroka izay manaja ny zon'ny tany ary miara-miasa amin'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana mba hampihenana ny fampiasana ny afo, hiarovana ny ala sy hambolena ny tany midadasika, hisorohana ny sahan-jezika vaovao ary hitantanana araka ny tokony ho izy ny haavon'ny rano amin'ny toeram-pambolena efa misy ao amin'ny sahan-jezika, ary manana mpiasa sy fitaovana ampy tsara hamantarana sy hanakanana mialoha ny afo . “
Manazava momba ny fanentanana sy ny fomba hanazavany “ny tsy fahafantaran'ny mpanjifa sy ny tompom-pihariana ny olan'ny menaka voanio ” ity lahatsary ity.
Tao anatin'ny antsafa nalefa imailaka niarahana tamin'ity mpanoratra ity, nizara ny valintenin'ireo tompon'ny efitra fisakafoanana sasany momba ny fanombohan'hetsika #GoHazeFree i Zhang Wen, Tale Mpanatanteraky ny PM Haze :
Toeram-pisakafoanana miisa 70 teo ho eo no notsidihanay hatramin'izao eto Singapaoro ary mampiasa menaka voanio ny ankamaroan'izy ireo rehefa mikarakara sakafo. Saika tsy mahatakatra mihitsy mikasika ny fifandraisan'ny menaka voanio sy ny setroka anefa izy ireo. Tsy misy amin'ireo trano fisakafoanana ireo no mahafantatra ny vahaolan'ny menaka voanio maharitra. Mila mampahafantatra ny olana aloha isika voalohany indrindra noho izany ary avy eo dia mandrisika ireo tompona trano fisakafoanana mba hivadika hampiasa ny menaka voanio maharitra. Nahita izahay fa misokatra amin'ny hafatray kokoa ireo efa mampiasa ny hafatra maharitra. Nanandrana ny menaka voanio maharitra amin'izao fotoana izao ny trano fisakafoanana iray izay notsidihanay ary manantena izahay fa handray ny fanapahan-kevitr'izy ireo amin'ny fivadihana hampiasa ny “menaka voanio maharitra” tsy ho ela izahay .
Niresaka momba ny fangatahan'ny PM Haze tamin'ny governemanta sy ny sehatra ara-bola ihany koa i Zhang Wen. Voampanga tamin'ny famatsiana vola ireo orinasa izay mamokatra menaka voanio tsy maharitra ny banky sasany any Singapaoro:
Nampanao ny fanesoran-ketra amin'ny vokatra ara-taratasy ampiasaina amin'ny fifanarahana nifaninanana ho an'ny sampandraharaham-panjakana tamin'ny fiandohan'ity taona ity ny Sampan-draharaham-pirenena misahana ny Tontolo Iainana eto Singapaoro (NEA)…. Manantena izahay fa handrisika amin'ny tsy fampiasana menaka voanio tsy maharitra/miteraka setroka ny governemanta ary handrisika amin'ny fampiasana ny menaka voanio maharitra/misoroka setroka.
Namoaka torolàlana mikasika ny famatsiam-bola ho setrin'ny zavo-tsetroka tamin'ny taona 2015 ny Fikambanan'ny Banky eto Singapaoro (ABS). Vao haingana ihany koa ny banky DBS no nampiasa ny politikan'ny Tsy Fandripahana Ala, Tsy Mila Sahan-jezika (tavy) ary Tsy Mila Fitrandrahana (NDPE) amin'ny famatsiam-bolan'ny menaka voanio. Manantena izahay fa hanapa-kevitra hampiasa politika mitovy amin'izany tsy ho ela ny banky hafa ao an-toerana toy ny OCBC sy ny UOB, ary hangarahara amin'ny fomba hampiharana izany politika izany ny banky rehetra sy handray anjara mavitrika kokoa amin'ny fiarovana ny rivotra iainantsika.
Nilaza ny PM Haze fa sady mikendry ny tompom-pihariana no mikendry indrindra indrindra ireo mpanjifa ny tetikasa amin'ny fangatahana fampiasana bebe kokoa ny menaka misoroka setroka (tsy nanaovana tavy).
Ny tanjon'ity hetsika fanentanana ity dia tsy mijanona fotsiny ao amin'ny trano fisakafoanana, fa handeha lavidavitra kokoa any amin'ny fanentanana bebe kokoa amin'ny olan'ny menaka voanio. Handrisika bebe kokoa ireo mpamokatra menaka voanio ny habetsahan'ny olona mangataka menaka voanio misoroka zavo-tsetroka (tsy nanaovana tavy).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/09/09/106634/
 Mampiroborobo : http://pmhaze.org/take-action/eatery-outreach/
 August 25, 2017: https://twitter.com/PM_Haze/status/901006352222257153
 ahitana : https://www.theonlinecitizen.com/2017/08/16/gohazefree-campaign-targets-use-of-unsustainable-palm-oil-in-eateries/
 fanentanana : https://globalvoices.org/2015/09/27/consumers-and-activists-take-action-in-singapore-to-stop-haze-pollution/
 Avy amin'ny: http://pmhaze.org/wp-content/uploads/2016/09/HazeFreeCookingOilGuide_small.pdf
 lahatsary : https://vimeo.com/228023390